दूर्जेय चेतना: November 2009
एउटै रेखाका हजारौं बिन्दुहरु
भावनात्मक परिवेश!!!!!! कस्तो निस्तब्धता छाएर यी दिन र रातहरु बित्दै छन्। वास्तबमा नमानेरै भए पनि हरेकले आफ्नै पक्षमा गन्तब्य र झुप्रोको खोजी लगातार गरिरहेको छ। नौलो अयाम र नैराष्यको पराकाष्ठामा समेत कषाय रातको अनुभूति औशीको रातमा पनि हुन पाईराखेको छैन। हुन सक्छ आंशिक सुखमै कालो रातमा पनि कता कता ताराको प्रकाश खोजिरहेको होस। आफ्नै परिबेशमा, संसारको यावत मानबिय कर्मका उदाहरणहरुका रेखा-रेखामा कतै न कतै आशाका बिन्दुहरुको समावेश नभएको हैन। वास्तवमा समयलाई निस्पट्ट, कहालीलाग्दो रात सगै लैजाने र डोराउने काममा अभ्यस्त भएर बितिरहेछ दिनचर्या।
सन्नाटामा कोही रोहेको र कराएको आवाज, कसैले ऐया र आत्था गरेको आवाज, नेपथ्यबाट कोही सल्लाह गरेको आवाज साथै कोही मस्त निन्द्रामा सुतिरहेको आवाज कानमा एकपछि अर्को क्रमश: र एकै साथ मिश्रण भएर तरङ्गित भएर आईरहेको छ। यहाँ वास्तवमा हरेक पक्षमा शान्तिको रेखा कोर्ने प्रयास भईरहेको छ। हरेकले शान्तिको आभास पाउने आशामा सजीव शरिरलाई निर्जीव यन्त्रको माझमा खडा गरिएको छ। वास्तवमा भ्रामक अथवा सन्दिग्ध सद्‍वृत्ति थियो यो। चाहेर पनि मानिसहरु नआउन खोज्ने, जिवनको कुनै पनि क्षणमा आफ्नो उपस्थिति नहोस भनेर चाहने, यस स्थानमा मानिसहरु विवशै भएर धकेलिन्छन्। जोड जोडले हरेक पक्षमा रातहरु काट्ने तयारिमा वारपार गर्दै छन्। मानिसहरु यहाँ आउन चाहदैनन्, तैपनि बाच्नको लागि एक अर्को आयाम: आफ्नो पुर्जाहरुमा ईन्धनले मात्र नपुगि त्यसको सुरक्षा र एकै साथ थाहनै नपाई संहारका लागि यहाँ आऊछन्। त्यसो त क्रियामा प्रतिक्रिया जीवित हुदा हुदै, स्वस्थ ब्यक्ति आफ्नो हरेक चाहतमा यहाँ नआउने हैन। शान्तिका लागि कुद्‍ने मानिस यहाँ आफैमा अशान्त छ। त्यसकै पछि लागेर होला कृतिम शान्त-ब्यक्ति यहाँ नदौडिएको हैन। दौडदै, तात्दै र साधिँदै मानिस आफैमा सर्वाङ्ग नाङ्गो भएर निर्जिव यन्त्रहरुको अगाडि प्रश्तुत गराउन मानिसहरुको घुईचो यहाँ नभएको हैन्। आफैमा निष्काम कोही छैन, तैपनि सामाजिक, आर्थिक परिस्थितिको अल्झ्याईलाई सम्हाल्दै सबैको घुइँचो यहाँ लाग्छ। त्यस्तै निश्चित पराकाष्ठामा ब्यक्ति सर्वाधिक उचाईबाट पछारिन्छ र जब धाईते बन्छ, तब फेरि उ यही धकेलिन्छ। सडकको माझबाट एम्बुलेन्सको धुन सगै, स्टेचर र ह्युईलचियर सगै फेरि पुन नाङ्गो बनाईन्छ। निर्जिव यन्त्रहरुको माझमा उसको शरिरको हरेक चालको लेखाजोखा गरिन्छ त्यो पनि कानमा स्टेथेस्कोप भिरेका सजीव भनाउदा निर्जिवहरुद्वारा। उसको आमपरिक्षण हुन्छ र हेरक चालहरु माथि सर्वाधिक नियन्त्रण गर्न खोजिन्छ र गरिन्छ पनि। फेरि क्रम सुरु हुन्छ; स्टेचरमा त्यही ब्यक्ति कसैको नियन्त्रणमा नै दौडन पुग्छ, दौडाईन्छ र निश्चित स्थानमा पुराईन्छ। भाव बिभोर भएर आफूलाई भाग्यमानि ठान्छ र नजिकैको अङ्‍कुशबाट आएको बिभिन्न ट्रेडमार्कको स्लाईन पानिको बोतल देख्छ तैपनि खिस्स हास्छ। समस्या अनुसार हरेकको विभिन्न फाईलहरु तयार हुन्छन् र सुरु हुन्छ फेरि ऐया र आत्था। हरेक दिन र रात जब सम्म उ यहाँ रहन्छ तब सम्म घोच्ने, थिच्ने र दवाउने कामको क्रम भईनै रहन्छ; बि.पी सेट, थर्मोमिटर र सुईहरुको चिसो र तीखो सियो सगै।
यो घोचाइ, थिचाइ र निलाइ सगै केही क्षण शान्ति पाएको अनुभूति गर्छन, वास्तबमा भौतिक अशान्तिमा बाच्नेहरु। शान्त पार्ने योगफल सगै यहाँ सधै घोचेर थिचेर शान्त सगं गुणा गराईन्छ। घोचाइ र थिचाइको प्रयास र त्यसको बराबर उसले पाएको शान्तको अनुभूतिहरुको दिनहुँ जसो मुल्याङ्कन गर्छन त्यही चुच्चा सुईहरुवाट। समय बित्छ; उ मानिरहेको हुदैन जान तर पनि उसलाई कुम्लो पोको पार्न लगाईन्छ। उ कुम्लो पोको पार्छ र कृत्रिम हासोँ सगै बिदा हुन्छ। साथमा पीडा नभएको अनुभव गर्छ तर हजारौ नियम र बन्धन बोकेर फर्किरहेको थाहनै पाउदैन। विचरा मानिस !! आफैले आफ्नो घरलाई अस्पताल बनाए पछि कहाँनै जानु छ र। गएको नाटकमात्र गरेर जस्तो भौतारिन्छ फेरि कुनै न कुनै निहुँमा फेरि त्यही आईपुग्छ । मानौ कुनै विकल्प छाडेको छैन उसले यो परिस्थिति श्रृजना गर्न। आफू दिनहुँ सुईको घोचाइ सहन्छ तर पनि कुनै विकल्प देख्दैन। विचरा मानिस। बास्तबमा अन्धो मानब जाति र यो मानव सृष्टि । सबै अगँहरु हुदाहुदै सापे जीवन बाँच्न अभ्यस्त मानिस।
त्यसो त कर्म क्षेत्रको यावत कठिन जीवन सगै कसैले यस्ता शय्याहरुमा आरामको महसुस नगर्ने हैन। तैपनि पहिलेको भन्दा पृथक शान्ति र चैन बोकिरहेको देखिन्छ र जान्छ, फेरि कहिलै नआउने सर्तमा। नवीनतम सद्प्रयासको जोड सगै यहाँ कयौं रेखाहरु कोरिएका छन्। मानिस आफ्नो घरलाई कहिले घर बनाउछ, कहिले अस्पताल त कहिले जेल। प्रचलित मान्यतालाई नभत्काईकन कुनै पनि काम नहुने ठान्ने उ किन निर्जीवहरुको बीचमा सजीवताको आनुभूति लिएर बाँच्न खोजिरहेको छ। हरेक कामलाई अधोरेखा राख्न मनपराउने उ अधोरेखाङ्कित बन्न भने मन नपराउने बनेको छ। वास्तवमै उ बाँच्न, चलाउन र हाक्नको अनभ्यासले गर्दा आफै सङ्कीर्णताले ग्रसित छ। हुन सक्छ उसले आफ्नो जीवनलाई एकाङ्की बनाएको छ। गलत हैन होला तर पनि यहाँ हजारौले खेल्नु, भोग्नु र चलाउनु छ एकाङ्की। आफैमा स्वार्थी बनिरहेको उ किन आफूमात्र नाटक मञ्चन गर्न खोजिरहेको छ। सघै बिर्सिएको छ; उसको जीवन एक्लो मात्र हैन बरु यहाँ त थुप्रै कबिला(हरु) छन् जो सबै बाँच्न चान्छन्। कूपमष्डूक भएको थाहनै नपाउने मान्छे बाहिर हेर्दैन, बुझ्दैन र थाहपाउन पनि चाहदैन तर मात्र आफ्नो लागि आउछ यहाँ। बेजोड संग घोचाइ र थिचाइमा आनन्द मानेर फर्किन्छ र त्यसै गरि फर्केने क्रम चलिरहन्छ। मायायुद्धमा खप्पिस मानिस आफ्नै मायाबी जालोमा बेस्करी जकडिदै जान्छ । समस्या र मात्र समस्याको थुप्रोहरुले बनाएका हजारौ बिन्दुको लेखा जोखामा जीवन खोज्ने प्रयास गरको छ र त्यही एउटै रेखाका हजारौ बिन्दुहरुको माझमा अल्झिएको छ यो मान्छे। उ कहाँ र कता अल्झिएको छ थाह छैन तर पनि रेखा थाहनै नपाई हजारौ बिन्दुहरुलाई समाहित गर्दै लम्बिदै छ एक अनन्त यात्रामा। सबैलाई चेतना भया।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
Posted by दूर्जेय चेतना at 2:40 PM